जेल बस्ने बलिउड कलाकार, कसको करियर के भयो? | Sagarmatha TV
सुशान्त सिंह राजपूतको मुद्दामा ड्रग्स जोडिएपछि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार भएकी छन्। सुशान्तको मृत्यु प्रकरणमा उनी र उनको परिवारको नाम यति लिइसकियो की उनलाई नचिन्ने अब सायद कमै होलान्।
यो घटनापछि रियाको करियरमा कस्तो प्रभाव पर्ला?
कुनै अवस्थामा जेल जानुले मानिसलाई मानसिक रुपमा समस्या त पार्छ नै त्यसले सामाजिक रुपमा पनि फरक व्यवहार सिर्जना गर्छ। यसले मानिसको पहिलाको जीवनभन्दा पछि फरक पारिदिन्छ। यहाँ केही सेलिब्रेटीहरुको बारेमा लेखिएको छ, जसको करियर जेल जीवन बिताएपछि फरक भयो।
सन् १९९१–१९९३ मा भएको मुम्बईको श्रृंखलावद्ध आक्रमणमा बलिउडका चर्चित अभिनेता सञ्जय दत्तलाई घरमा गैरकानुनी रुपमा हतियार राखेको मुद्दामा ५ वर्षको जेल सजाय सुनाइयो। उनले तोकिएको जेल सजाय काटे र सन् २०१६ मा बाहिर आए। उनको जेल जीवन र उनी बाहिर निस्कने कुराको धेरै चर्चा भएको थियो। सन् २०१७ मा उनी चलचित्र क्षेत्रमा फर्किए, उनलाई फ्यानले सञ्जू बाबा भनेर स्वागत गरे।
त्यसपछि उनको हातमा धेरै चलचित्रहरु छन्। उनले अभिनय गरेको चलचित्र ‘सडक–२’ भर्खरै प्रदर्शन भएको छ। अहिले उनी शमशेरा चलचित्रको काममा व्यस्त छन्। त्यसपछि उनले ब्रम्हास्त्र, केजीएफ २, पृथ्वीराज, भुज र तोरबाज लगायत चलचित्रमा काम गर्ने सम्झौता गरेका छन्।
यद्यपी उनलाई भर्खरै फोक्सोको क्यान्सर भएको छ। उनी स्वदेशमा नै यसको उपचार गराइरहेका छन्।
दिग्गज अभिनेता तथा निर्देशक फिरोज खानका छोरा फरदिन खानले सन् १९९८ मा चलचित्र ‘प्रेम अगन’ बाट डेब्यू गरेका थिए। यसको केही वर्षपछि उनलाई घरमा कोकिन राख्ने र सप्लाई गरेको आरोपमा उनलाई जेल जानु पर्‍यो। जेल बाहिर आएपछि पनि उनको करियर राम्रै चलिरहेको थियो। उनले धेरै चलचित्रमा काम गरे पनि उनी ठूला कलाकार बन्न पाएनन्। सन् २०१० मा उनले अभिनय गरेको चलचित्र ‘दूल्हा मिल गया’ प्रदर्शन भयो, यस पछाडि उनी चलचित्र क्षेत्रबाट बाहिर भए।
सन् २००६ मा अभिनेता जोनले आफूले चलाएको मोटरसाइकलको नियन्त्रण गुमाए, जसको कारण साइकलमा सवार दुई जनालाई चोट लाग्यो। यसपछि गैरजिम्मेवारीका साथ सवारीसाधन चलाएकोमा क्षतिपूर्ति त तिर्नै पर्‍यो, साथै १५ दिनको जेल सजाय पनि भयो। यस विषयले उनको चलचित्र जीवनमा केही असर परेन। उनले चलचित्रमा अहिलेसम्म निरन्तर काम गरि नै रहेका छन्।
सुपरस्टार सलमान खानमाथि अहिले पनि धेरैओटा मुद्दा चलिरहेका छन्। जसमा दुईओटा मुद्दाहरु सबैभन्दा ठूला छन्। एउटा हिट एण्ड रन र अर्को कालो हरिणको शिकार गरेको। यही मुद्दामा उनले जेलमा केही समय बिताइसकेका छन्। तर पनि उनको फ्यान फलोइङ र चर्चा धेरै माथि छ। सलमानका हरेक चलचित्रले बक्स अफिसमा १०० करोडभन्दा धेरै व्यापार गरिरहेको हुन्छ।
ख्वाहिशे चलचित्रबाट सन् २००५ मा डेब्यू गरेका कलाकार शाइनी अहूजाको करियर धेरै ठूलो कहिले पनि रहेन। सन् २००९ मा शाइनीमाथि आफ्नो घरमा काम गर्ने कामदारलाई बलात्कार गरेको आरोप लाग्यो। आरोप प्रमाणित भइसकेपछि उनी जेल गए। योसँगै शाइनीको फेम गयो, उनले इन्डस्ट्रीमा काम पाएनन् र अहिले उनी गुमनाम जीवन बिताइरहेका छन्।
नव कलाकार सूरज पञ्चोली पनि बुवा आदित्य पञ्चोली जस्तै विवादमा रहेका छन्। नायिका जिया खानको आत्महत्या प्रकरणमा शंकाको घेरामा रहेका सूरजलाई जेलको चक्कर काट्न परेको थियो।
सूरजले आफ्नो बलिउड करियर सन् २०१५ मा सुरु गरेका हुन्। उनलाई धेरै फेम भने प्राप्त भएन। तर सूरजलाई आउँदो दिनमा केही प्रोजेक्टमा काम गर्ने अवसरहरु भने आइरहेका छन्।